Meizu Rịba ama 9: ihe niile gbasara ụlọ ahịa ndị ọzọ na - abịa n'ihu | Gam akporosis
Meizu Rịba ama 9: ihe niile gbasara ụlọ ahịa ndị ọzọ dị na China
Aaron Rivas | | Meizu, Noticias
El Cheta Meizu 9 Achọpụtara ya awa ole na ole gara aga na nkọwapụta ole na ole na TENAA n'okpuru akara ngosi 'M923Q'. Ugbu a, emelitere ederede TENAA nke ekwentị na ụdịdị niile.
Ndepụta nke Meizu Rịba 9 site na ụlọ ọrụ ndị China na-ekpughe na akụkụ ya bụ 153.11 x 74.34 x 8.65 mm ma ọ dị gram 169.7. The smartphone ga-abata na atọ na agba variants na China, dị ka Black Ocher, White Ocher, na Starry Blue. Nkọwa na àgwà ndị ọzọ bụ nkọwa zuru ezu n'okpuru.
A na-eji ama ama ama 6.2 anụ ọhịa ahụ nke na-emepụta FullHD + mkpebi nke pikselụ 2,244 x 1,080. Asịrị nwere na ọ ga-egwu egwuregwu ngosi. Ihe onyogho a na - ese puta na egosiputa ihe ngosi 9 nke nwere obere mmiri dobe. Agbanyeghị, onyonyo nke ekwentị ahụ apụtabeghị na TENAA. The Meizu M923Q depụtara na TENAA nwere ike imelite ya na onyonyo n’oge n’adighi anya ikpughere ya ihu na azụ azụ.
Meizu Rịba ama 9 ekpe
Dị ka certifier, a 2.0 GHz octa-isi processor, nke bụ ihe ọ bụla karịa Snapdragon 675 chipset, ọ na-ike Meizu Rịba ama 9. SoC tinyere 6 GB nke RAM. Akwadoola sistemụ arụmọrụ 9 64 dị na ngwaọrụ ahụ. Maka nchekwa, o nwere 4,000GB nke nchekwa dị n'ime. Ejiri batrị XNUMX mAh kwadoro ya.
Ntọala igwefoto abụọ nke azụ na Meizu Note 9 gụnyere a 48 megapixel isi ihe mmetụta nke a na-enyere aka site na 5 megapixel secondary sensor. E nwere asịrị na ọ gaghị abụ ihe mmetụta Sony IMX586ma Samsung ISOCELL GM1 sensor bụ nke dị na ama Ihe ngosi RedN 7.
Ihe ngosi nke Meizu Rịba ama 9 ga-egosipụta selfie 20-megapixel. A na-atụ anya ka ọ bụrụ onye na-agụ akara mkpịsị aka n'akụkụ. Rịba ama 9 ga-anọchi onye ahụ Cheta Meizu 8 nke weputara n ’October 2018. Ihe nlere 8 enweghi oghere kaadi microSD na Rịba ama ndepụta 9 nke TENAA na-ekpughe na ọ gaghị enwekwa nkwado maka nchekwa dị na mpụga. Dedị nke bu ụzọ na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa 18W mCharge. Ya mere, a na-atụ anya Nkọwa 9 iji kwado teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa.
Meizu ekwetabeghị ụbọchị ntọhapụ nke Ndetu 9. Na mgbakwunye na TENAA, ekwentị ahụ nwetakwara nkwado site na ikike 3C na China. O yikarịrị ka ọ ga-abụ onye isi mgbe ememme Ememme China nke ọnwa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu Rịba ama 9: ihe niile gbasara ụlọ ahịa ndị ọzọ dị na China
Samsung Galaxy A90 sụgharịrị: igwefoto na-agbapụta agbapụta na nkọwapụta nkọwa ndị ọzọ
Otu esi emepụta ụzọ mkpirisi na Windows 10 dị ka WebApps